एन आर एन लाइ एकलौटी चलाउने गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक (रिपोर्ट सहित) » नेपाल प्लस
एन आर एन लाइ एकलौटी चलाउने गोप्य रिपोर्ट सार्वजनिक (रिपोर्ट सहित)
एन आर एन ए युरोप क्षेत्रिय भेला घनिभूत रुपमा चलिरहेकै थियो । एन आर एन ए का केन्द्रिय तहका अभियन्ताहरु हलको अघिल्लो पङ्तिमा थिए । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, प्रमुख संरक्षक जिवा लामिछाने, उपाध्यक्ष कुमार पन्त, केन्द्रिय महासचिव डा बद्रि केसी, प्रवक्ता रन्जु वाग्ले, संरक्षक रामप्रताप थापा, दिल गुरुङ लगायत सबै । अध्यक्ष शेष घलेलाई मञ्चमा बोलाईयो । उनले एन आर ए को भावि योजना सुनाउँदै थिए । उनको छेउमा दाहिनेतिर एक जना युवा थिए, कम्प्युटरबाट चित्रसहितको रिपोर्ट भित्तामा फ्याँक्ने र त्यहि अनुसार शेष घलेले ब्याख्या सुनाउने । तर एउटा महत्वपूर्ण समयमा कम्प्युटरको भित्तो बिजुली चम्किए जस्तो झ्यार झ्यार झ्यार झ्यार देखियो । त्यसमा के लेखिएको छ कसैले हेर्न पाएन । शेष घलेलेपनि यसलाई स्पष्ठसित देखाउनुपर्ने, थप स्पष्ठ पार्नुपर्ने जाँघर देखाएनन् । तर बिजुली चम्किएझैं पर्दा झ्यार झ्यार गर्दा शेष घले सुनाउँदै थिए ‘ एन आर एन ए लाई नयाँ उचाई र सफलतामा पुर्‍याउन भिजन २०२० को योजना । उनले यति भनेपछि करिब साढे तिनसय सहभागि सम्मिलित हलमा मुख्य नेत्रित्वकाबिच गलफत्ती परिहाल्यो । त्यो भिजन २०२० शेष घलेले तयार गरेपनि त्यसलाई ब्रिहद छलफलमा त ल्याइएन नै बरु हालसम्म त्यसलाई गोप्य राखिएको छ । ‘कफिडेन्सियल’ भनेर उल्लेख गरिएको करिब १० पेजको त्यो दस्ताबेज गोप्य स्रोतबाट फेला परेको छ ।
जब शेष घलेले अमेरिकाको क्षेत्रिय सम्मेलन न्यु जर्सीबाटपनि अनुमोदित भएको बताए तब एन आर एन ए का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोपनि चुप लागेनन् । उनले माईक मागे । त्यसपछि शेष घलेको भिजन २०२० को बिरोध गरे । ‘यो भिजन २० भनेको के हो ? के छ यसमा ? यति गम्भिर विषयलाई किन यति हल्का रुपमा प्रस्तुत गरिँदै छ ? यो विषयलाई किन घनिभूत रुपमा छलफलमा ल्याउन सकिन्न ? यो भिजन २०२० का बारेमा न्यु जर्सीमा प्रसंग उठेको हो तर पछि छलफल गरौंला ब्रिस्त्रित रुपमा भनेर टुंग्याएको हो । यस्तो गम्भिर विषयलाई सबै एन आर एन ए का बिच ब्रिस्त्रित छलफलमा ल्याउनुपर्छ, यो गम्भिर विषय हो ।’ उनको जवाफ सुनेपछि शेष घलेले फेरि उहि कुरो दोहोर्‍याए ‘मन परे सहमति गरौं । यहि अवस्थामा एन आर एन लाइ हाँक्न सकिन्न । तर मन पर्दैन भने यसलाई बिर्सिन सकिन्छ । यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन ।’
शेष घलेको भिजन २०२० मा थुप्रै सकारात्मक पाटाहरु नभएका होइनन् । तर उनले यो दस्तावेजलाई अमेरिकाको न्युजर्सीमा भएको क्षेत्रिय सम्मेलनमै पास भएको दाबी गर्नु र दस्ताबेजमा गोप्य भनेर उल्लेख गर्नुले उनको नियतमाथि शंका उब्जिन्छ । उनले यो दस्ताबेजलाई सार्वजनिक नगरेकालेपनि बिवाद भएको हो । यो भिजन २०२० कालागि उनले सन् २०१५ बाटै गोप्यरुपमा प्रयास थालेको दस्ताबेज पढ्दा देखिन्छ । किनभने सन् २०१७ को नवौं युरोपेली भेलामा भिजन २०२० प्रस्तुत गरिने छ भन्ने भूमिकामै उल्लेख छ ।
न्युजर्सीमा भएको नवौं क्षेत्रिय भेलामा दस्तावेज पेश गरि प्रतिक्रियासमेत लिएर रिपोर्ट पेश गरेको उल्लेख छ । तर यो दस्तावेज कहिँ कतैपनि सार्वजनिक नगरेको केन्द्रिय अभियन्ता, संरक्षक र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यहरुले खुलेरै बताएका थिए, जुलाई २९ र ३० मा जर्मनीमा भएको क्षेत्रिय भेलामा । दस्तावेजको धेरै ठाउँमा गोप्य भनेर उल्लेख गरिएकालेपनि उनी चुकेका छन् ।
उनले गोप्य उल्लेख गरेको पहिलो भागमा उल्लेख गरेका छन् ‘एन आर एन को सरोकार (ईस्सु) उपलब्धि के हो भन्ने विषय होइन । एन आर एनका उद्देश्यहरुलाई कसरि प्राप्ति गर्ने भन्ने हो ।’ एन आर एन एका उपलब्धिहरुको प्राप्तिकालागि एन आर एनको संस्थागत उपलब्धिकालागि कुनै परिवर्तनको खाँचोको महसुस नगरिएको आरोपपनि उनले लगाएका छन् ।
गोप्य उल्लेख गरिएको बुदा नंबर सातमा एन आर एन ए लाई पन्चायतकालको राजाले नुयुक्त गर्ने राजपरिषद सचिवालय जस्तै बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । शहरि स्तरको संस्थाबाट देश देशमा क्षेत्रिय स्तरको संस्था निर्माण गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय संरचना खडा गर्दै विश्व संरचना निर्माण गर्ने । सात नंबरको बुँदाको बि दोस्रोमा स्वयंसेवी तरिकाले निर्वाचित परिषदको परिकल्पना गरिएको छ । यसमा एक बलियो सचिवालय बनाउने भनिएको छ जसमा विश्वका ठूला फर्महरुबाट उच्च मानव स्रोतहरुलाई नियुक्त गरिने छ भन्ने उल्लेख छ । कुनै विशेषज्ञको आवश्यक पर्दा हालसम्म एन आर एन ए ले गैह्र आवाशिय नेपालीहरुलाईनै प्राथमिकता दिनुपर्ने योजना बनाउँदै आएका थिए । तर घलेको भिजन २०२० ले जुनसुकै देशका नागरिकलाई नियुक्त गर्ने र ति नेपाली हुनु नपर्ने प्रस्ताव अगि सारेको छ । यो विषयमा हलभित्र एन आर एन ए का प्रमुख संरक्षक उपेन्द्र महतोलेपनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसबेला घलेले ‘निस्चित रुपमा जो सक्षम छ उसैलाई नियुक्त गरिन्छ’ भन्ने जवाफ महतोलाई दिएका थिए ।
तेस्रो बुँदा गम्भिर छ । किनभने यो परिषदको मुख्य कार्य अध्यक्षले गर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षलाई संस्थाको एकाधिकार दिएको छ । त्यसमा रहेका अन्य सदस्यहरुले अध्यक्षलाई सहयोग र प्रशंसा गर्न सक्ने छन् । अध्यक्षलाई पथप्रदर्शन गर्न एक सल्लाहकार बोर्ड गठन गरिने छ । निर्माण हुने परिषद र अध्यक्षलाई तिनले पथप्रदर्शकको काम गर्ने छन् । अर्थात् यो संरचना हेर्दा पञ्चायति शासन ब्यवस्थामा राजाले निर्माण गर्ने राजपरिषद सचिवालय जस्तै हुने छ जसले राजालाई सल्लाह दिन त सक्छ तर अधिकार केहि हुँदैन ।
उनको गोप्य दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार आफ्ना कार्ययोजना सफल बनाउन अध्यक्षले पाँच सदस्य नियुक्त गरि कमिटि गठन गर्ने छन् । अगष्ट २०१७ सम्ममा अध्यक्षले यो योजनाको अनुमोदन प्राप्त गरिसक्ने उल्लेख छ । अर्थात् जर्मनीको फ्र्यांकफर्टमा हुने एन आर एन ए क्षेत्रिय भेलाबाट साट्टसुट्ट पारेर पारिद गराउने उनको उद्देश्य देखिन्छ । अक्टोबर २०१७ बाट आगामी अध्यक्षले यो भिजन २०२० लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शुरु गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति: August 9, 2017